ဆောင်းယွန်းလ – ရုပ်ရှင်မကြည့်တော့ဘူး | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းယွန်းလ – ရုပ်ရှင်မကြည့်တော့ဘူး
ဒီတ့မန် မနေ့တနေ့ဟာ အားလုံးအတူတူပဲ….
ဟိုဟိုဒီဒီ သွားရင်း လာရင်း
သေမင်းကို ဈေးဆစ်ရမလိုလိုနဲ့ …..
ကြမ်းစရာရှိတာကိုလည်း ကြမ်းမှ ….
ငါတို့ ဘယ်တော့မှ ရုပ်ရှင်မကြည့်ကြတော့ဘူး….။
ဆောင်းယွန်းလ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆)